Maxaa cryptocurrency waxaa maal lagula talinayaa in ay iska iibiso, kaas oo ka mid ah si ay u sii? - Blockchain News
dhamaadka May yaabay warshadaha ee crypto leh afgambi bearish caan ah oo ku saabsan is-dhaafsiga. In saddexda bilood ee la soo dhaafay ee May, ka TOP-25 cryptocurrency muujisay hoos u dareemi. Sidaas, on May 22, hoos u dhacay Seeraar $ 8000 markii ugu horeysay tan iyo bishii April 18. Ceter, iyo Seeraar Cash ku degtay 14% in toddobaadkii, EOS – by 6%, iyo XRP – by 8.5%. guusha kaliya ee toddobaadkii ahaa TRON (TRX), kaas oo sheegay koror yar ee xigashooyin ay.
Warku of mid ka mid ah calamado ugu weyn ee suuqa – ratio ee Labada ciyaaryahan cryptocurrency of Ethereum iyo Seeraar ah – sidoo kale beddelay mid ka mid ah, midhona. Taas aawadeed, Altcoins kale, ku salaysan blockchain Ethereum iyo, Sidaa darteed, qayb ahaan ku tiirsan tahay mowqifkeeda, maratay dhici karaa haddii heerka Seeraar hoos u sii dhacaysa. Isla mar ahaantaana, xaraf wadareed suuqa cryptocurrencies hoos u $ 322.5 billion, dhula by 14% marka la barbar dhigo saddexda bilood ee labaad ee May.
Maxaan samayn ganacsatada suuqa, taas oo soo baxday in wixii baabacooyinka ku bearish? Recently, maal-ganay hore u yihiin xirfad quruxsan ee arrimaha cryptocurrencies iyo mar horeba si xoog leh kula taliyay ganacsatada waxa ay u soo iibsadaan, waxa inaad xajisaan oo waxa la iibiyo. Inkasta oo in January habkani ka mid ah maal-Fiat weyn ma ahayn mid cad.
Tusaale ahaan, Spencer Bogart, lammaane at Blockchain Capital, ayaa aaminsan in xaaladda hadda on dhaafsi waa faa'iido iibsan guul. “Tan iyo Seeraar ayaa dhawaan la isticmaalo iyo aad u badan inta badan oo weli uu leeyahay dano badan oo hay'adeed, waxaa haboon maalgashiga waxa ku jira. All bangiyada weyn ayaa isku dayaya inaan isaga la shaqeeyo, bixiyaan macaamiishooda. Qaar ka mid ah dhufto ee ganacsiga u furan. dhidibada A qoto dheer ah Seeraar waa guud ahaan wanaagsan, “Afayeenka ayaa sheegay in.
Inkastoo dhaqdhaqaaqa degaya ee cryptocurrency ugu horeeyay dunida ee, Bogart waa mid aad u fiican oo ku saabsan mustaqbalkiisa. “Seeraar karaa ahaan ka jaban? Dhab. Laakiin ha Waxaan qabaa in muddo sanad ah uu dabcan noqon doona sare? Absolutely hubi, “- ayuu ku ah Wareysi for CNBC.
saadaal wanaagsan, si kastaba ha ahaatee, ma khuseeyaan altcoins. “cryptocurrencies badan ayaa overvalued oo aan lagu kalsoonaan karin. Waxaa jirta fursad ah in ay Doono “ganaan”, laakiin waxay leeyihiin caqabado badan for this, “Bogart yiri.
Maal kale hawgal talinaysaa qaadashada aragti dhaw at Cardano (ADA), TRON (TRX), xaraf (Ever tan iyo markii) iyo neo (neo).
Waxa xiiso leh, sida Spencer Ethereum ku Bogart waa halkii taxadar. “Waxa ugu waa, waxaa jira wax badan oo ka mid ah ICO on blockchain Ethereum ah. Lama oga waxa dhici doona mashaariicda iyo sida taasi u saameyn doonaa dabcan Ethereum taraynin,” ayuu uga hadashay. “Dhanka kale, Waxaan qaban lahaa kiishad ee ciyaaryahano waa weyn sida udhaqaajiyaa, Seeraar Cash iyo EOS.”
dunida kale crypto sidoo kale muujiyaan saadaasha halkii taxadar. “Waxa la sameeyo on isbedel bearish, taas oo, muddo dhexdhexaad ah, aan la xaqiijiyay wax? Waxaa hubaal ah ma aha qiimihiisu iibsan cryptocurrency si kuteen. Haddii aad doonaysid in aad wax qaadato muddo lix bilood ama sanad ah, ka dibna aadan wax ku qaataan. Haddii aad hore u fadhiya istaraatijiyad faylalka muddo dheer ah, kiiskiina, maxaa yeelay on arrimuhu muddo gaaban ah ma cadda in waxa uu noqon doonaa suurto gal ah in ay ka soo boodi iyo mar kale ku boodaan qiimo wanaagsan more. Iibinta dhigaysa kaliya dareen haddii aad tahay ganacsade xirfadle. Laakiin xitaa waxay ku ganacsan kartaa, dhab ahaan, kaliya on rebounds farsamo, sidaas kiis kasta waxa fiican in aad sii hantidooda. Guud, aan talo waa inay bixiyaan si ay altcoins la xaraf yar yahay dareenka, maxaa yeelay, suuqa waxaa hadda gelida hoos, iyo altcoins ka dib markii Seeraar waxaa la taago waqtiyo dheeraad ah.
Waxa la sameeyo xaaladaha hoos u dhac ah ee suuqa, ganacsade kasta go'aansado inuu nafsaddiisa. Waxa ugu muhiimsan waa in ay si sax ah u sameeyaan boortofooliyada cryptocurrency iyo argagixin haddii ay jiraan degidda suuqa. Gaar ahaan on sida cryptocurrency kacsan.